ट्रेन द्वारा बजार लागि युरोप मा सबै भन्दा राम्रो शहर | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > ट्रेन द्वारा बजार लागि युरोप मा सबै भन्दा राम्रो शहर
नयाँ अनुभव यात्रा को लागि एक उत्कृष्ट मनसाय हो. तथापि, कहिलेकाहीं पर्यटक-मैत्री दृष्टि सपिङ्ग spree गर्न मैनबत्ती धान्न सक्दैन, जतिसुकै प्रभावशाली. किनमेल लागि भ्रमण गर्ने मानिसहरू यो थाहा, र त्यहाँ भाग्यवस तिनीहरूले खर्च प्रवृत्ति unleash गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ युरोप मा शहर को प्रशस्त छन्.
तथापि, गर्न थप पैसा र किनमेल लागि बायाँ ऊर्जा, यो एक राम्रो विचार छ सस्तो यात्रा तर छिटो. पूरा रेल द्वारा किनमेल लागि युरोप मा सबै भन्दा राम्रो शहर गर्न प्राप्त ती अवस्था दुवै. का प्रमुख किनमेल गन्तव्यहरू केही मा एक नजर होस् र रेल द्वारा त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्छन् कसरी:
एम्स्टर्डम मा किनमेल, नेदरल्यान्ड्स
एम्स्टर्डम धेरै कुराहरू लागि जानिन्छ, र यसको सपिङ्ग सेन्टर तिनीहरूलाई को एक हो. शहर किनमेल गतिविधिहरु र ब्रान्डहरु को एक विशाल सीमा प्रदान गर्दछ, आफ्नो बजेट कति ठूलो आधारमा. तपाईंले केही छ upscale किनमेल खोज्दै हुनुहुन्छ भने, को P.C. Hoofstraat तपाईं लागि सडक छ. विभाग स्टोर र सपिङ्ग सेन्टर लागि, तपाईं डी Bijenkorf मारा सक्छ, मैग्ना प्लाजा वा Kalvertoren.
तपाईं एकैचोटि धेरै फरक स्टोर र शैलीहरू अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने de Negen Straatjes वा नौ स्ट्रिट्सहरू पनि दुकानदारों लागि ठूलो हो. तपाईं पुग्न सक्नुहुन्छ रेल द्वारा एम्स्टर्डम सजिलै सबैभन्दा प्रमुख युरोपेली शहर देखि, पेरिस र कोपेनहेगन सहित.
मिलान किनमेल, इटाली शपिंगका लागि युरोपमा सर्वश्रेष्ठ शहरहरूको लागि हाम्रो फेसन पिक हो
मिलान फेसनको राजधानी मानिएकोमा किनमेल गर्नका लागि यूरोपको उत्तम शहरहरूमा गणना गरिन्छ. तथापि, मिलान छैन केवल बारेमा छ फैशन को Duomo क्षेत्रमा र उच्च-सडक फैशन. अन्वेषण गर्न धेरै अन्य ठाउँहरूमा छन्, ब्रे्रा जिल्ला को कला पसलहरु बाट Navigli क्षेत्र मा फन्की प्रभावहरु लाई. मिलान साँच्चै एक खरिदार गरेको स्वर्ग छ. यसलाई तपाईंको चासो हुनुहुन्छ भने, तपाईं यात्रा गर्न सक्छन् मिलान सजिलै रोम देखि रेल द्वारा, भेनिस, युरोप मा साथै अन्य शहर.
अनुभवी दुकानदारों ज्यूरिख प्रेम, विशेष गरी ती जो आफ्नो भन्दा महंगी स्टोर को सबै भन्दा राम्रो बनाउन सक्छ. यो भन्दा metropolises भन्दा फरक महसुस किनभने ज्यूरिख किनमेल लागि युरोप मा सबै भन्दा राम्रो शहर मध्ये एक छ. को Sihlcity किनमेल केन्द्र र सपिङ्ग मल Glatt तपाईं शायद प्रयोग गरिरहनु भएको विशाल सपिङ्ग मल छैन, तर तिनीहरूले एक गुणस्तर खुद्रा प्रस्ताव गर्न अनुभव.
अन्य उल्लेखनीय हटस्पट को Bahnhofstrasse समावेश, Europaallee, र क्षेत्र Langstrasse आसपास, तपाईं चाहनुहुन्छ विशेष गरी यदि जाँच स्विस र शहरी डिजाइन. रेल द्वारा त्यहाँ रही बर्लिन देखि सजिलो छ, म्यूनिख, भियना, र अन्य प्रमुख यूरोपीय शहरहरू.
ज्यूरिख तालिम जेनेभाको
बर्लिन, जर्मनी किनमेलको लागि युरोप मा सर्वश्रेष्ठ शहर बीच पनि छ
बर्लिन जहाँ तपाईं वस्तुतः केहि पाउन सक्नुहुन्छ यसको विशाल खुद्रा जिल्लामा संग किनमेल लागि युरोप मा सबै भन्दा राम्रो शहर को एक को शीर्षक मिलाउँछ. गहिरो pockets भएकाहरूले लागि, Kurfürstendamm वा "Ku'damm" अवश्य-यात्रा हो, एक तंग बजेट पक्कै साथ ती गर्दा एक यात्रा रमाइलो को Tauentzienstrase गर्न. एक लोकप्रिय रूपमा युरोपेली गन्तव्य र एक प्रमुख शहर, बर्लिन सजिलै रेल द्वारा पहुँच भइरहेको छ युरोप मा धेरै अन्य शहर बाट.
कि आन्ट्वर्प अद्वितीय किनमेल-बुद्धिमानी बनाउन कुराहरू एक यसको विश्व-प्रसिद्ध हीरा जिल्ला हो. तथापि, एन्ट्वर्पसँग डिजाइनरको अभाव छैन पुराना पसलहरूमा, प्राचीन स्टोर वा हलचल बजार या त. यो सबै दुकानदारों एक अद्वितीय अनुभव प्रदान गर्न सक्छन्, पनि कडा छन् भनेर ती प्रसन्न तुल्याउन. तपाईं पुग्न सक्नुहुन्छ रेल द्वारा आन्ट्वर्प बर्लिन देखि, पेरिस, र युरोप मा अन्य शहर.
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो शहर केही केही ठूलो सपिङ्ग लागि तयार? तपाईंको यात्रा योजना, र तपाईंको रेल टिकट बुक प्रारम्भिक!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-europe-shopping-train%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, र तपाईं / डी वा / RU र अधिक भाषा गर्न मा / परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
#traveleurope europetravel किनमेल रेल
ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा रूस, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप